Boko Xaraam oo magaalada Bama qabsatay - BBC News Somali
Boko Xaraam oo magaalada Bama qabsatay
Kooxda mintidiinta Boko Xaraam ee dalka Nigeria, ayaa la wareegtay magaalada Bama ee waqooyiga bari ee dalka, kadib dagaallo xoogan oo dhaxmaray mintidiinta iyo ciidamada dawladda, sida ay sheegeen dadka deegaanka.
Waxaa la sheegay in kumanaan rayid ah iyo ciidanka dawladda ay ka soo baxsadeen magaalada.
Milatariga wali si rasmi ah ugama uusan hadlin in lagala wareegay magaalada iyo in kale. Waa magaalada labaad ee ugu weyn gobalka Borno.
Bishii la soo dhaafay, Boko Xaraam, waxay sheegtay in dawlad islaami ah ay ka alkuntay deegaanada ay maamusho ee waqooyiga bari ee dalkaasi.
Image caption Hoggaamiyaha Boko Xaraam Abubakar Shekau
Haddii la xaqiijiyo qabsashada Bama, waxa ay sii xoojineysaa walaaca laga qabo in bartilmaameedka xiga ee Boko Xaraam uu noqon doono magaalada Maiduguri, oo ah caasimada gobalka Borno oo 75 km oo kali ah u jirta magaalda Bama, sida uu sheegay Mansur Liman, tifaftiraha laanta afka Hausa-ha ee BBC, oo hadda ku sugan caaasimada Abuja.
Waxa ay noqon doontaa magaalada ugu weyn ee gacanta u gasho Boko Xaraam, haddii ay Boko Haram Maiduguri la wareegto.
Dadka deegaanka, ayaa BBC-da u sheegay in Boko Xaraam ay magaalada Bama la wareegtay kadib dagaal xooggan oo halkaa ka dhacay maalmihii Axadda iyo Isniinta.
Waxaa la sheegay in milatariga Nigeria uu iska caabiyey kooxda markii hore, balse ay kooxdu soo qaadday weerar rogaal celis ah iyagoo wata gawaarida gaashaaman.
Waxa ay marka hore la wareegeen saldhigyada ciidamada ka hor inta aysan magaalada soo galin.
Wararka qaar, ayaa sheegaya in dagaalka Bama uu sababay khasaaro ballaaran, oo soo gaaray ciidamada dagaalamayey iyo dadka rayidka ahba.
Wakaalada wararka AP oo soo xiganeysa saraakiisha amniga, ayaa ku warantay in 70 ka tirsan kooxda mintidiinta lagu dilay weerarkaas.
Saraakiisha Milatariga Nigeria, ayaa war ay soo dhigeen barta Twitter-ka waxa ay ku shegeen in ay duqeeyeen magaalda Bama, oo ay Boko xaraam ka saareen Isniintii, balse dadka deegaanka ayaa sheegashadaas beeniyey.
Tirakoobkii u dambeeyey ee laga sameeyey magaalada Bama 2006-dii, waxaa uu muujiyay in 270 kun oo qof in ay ku nool yihiin.
Kacdoonka Boko Xaraam oo socday muddo shan sano ah, ayaa sii xogaystay bilihii dhawaa, inkastoo dawladda Nigeria ay ciidamo dheeraad ah geysay gobollada ay ku xoogan yihin mintidiinta Boko Xaraam.
Image caption Ciidamada dowladda ee la dagaalamaya mintidiinta
Bishii April, kooxda Boko Xaraam, ayaa indhaha caalamka soo jiidatay markii ay afduubeen in ka badan 200 oo gabdhood oo ay ka afduubeen iskuul ku yaalla magaalada Chibok ee isla gobalka Borno.
Waddamada shiinaha, Faransiiska, Britain, iyo Mareykanka, ayaa kaalmo milatari u diray dawladda Nigeria si ay gacan uga geeystaan soo furashada gabdhaha, balse illaa iyo hadda lama soo badbaadin.